Voice sahwira Pro, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe waona pane nhau kuti mutori wenhau ari kushandisa iPhone kunyora zvinyorwa zvemumwe munhu. Kunyangwe chiri chokwadi kuti iko kunyorera kwakaisirwa natively Voice Notes, hazvina kushata zvachose Hongu izvo zvishoma kwazvo maererano nemabasa, izvo zvisingatibvumidze isu kuzvishandisa senzira yenguva dzose yekurekodha zvirevo kana kuitisa mabvunzurudzo kana isu takabatanidzwa munyika yeutapi venhau.
Neraki isu tinogona kuwana muApp Store nhamba hombe yekushandisa iyo inotibvumidza isu kuita iyi mhando yekurekodha asi nenhamba hombe yemabasa ayo anozo gonesa kurapwa kwavo. Tiri kutaura nezve Voice Recorder Pro, chishandiso icho parizvino inowanikwa kurodha mahara Nguva Yakatemwa.
Inzwi sahwira Pro app Iine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, saka kana iwe uchida kutora mukana weichi chipo, usanonoka kurodha pasi. Voice Recorder Pro inotibvumidza kuita zvinyorwa zvezwi, kugadzirisa zvakarekodhwa, chinja zvinyorwa kuva zvinyorwa nekutenda kumitauro makumi matatu nemana iyo inoiziva, ichikamura kurekodha muchidimbu ... zvese nekuda kwekushongedzwa uye nyore kushandisa interface.
1 Zvinoumba Voice sahwira Pro
2 Voice sahwira Pro mashoko
Zvinoumba Voice sahwira Pro
Kurekodha izwi. Nguva yekurekodha inongogumira neyekugona kwesimba kwechigadzirwa.
Cheka basa. Kana zvichidikanwa, chikamu chekurekodha chinogona kusarudzwa uye chengetwa sefaira rakasiyana.
Kutaura kune kushandurwa kwemavara
Kuchinja iyo interface yemavara scheme
Ronga mafaira nezuva
Ruzha Oscillogram - Iye zvino unogona kusarudza zviri nyore chidimbu che odhiyo.
Voice sahwira Pro mashoko
Kugadziridza kwekupedzisira: 02-05-2016
Saizi: 23.4 MB
Inoenderana neApple Watch
Kugarisana: Inoda iOS 8.0 kana yepamusoro uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Voice Recorder: odhiyo yekurekodha3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Voice sahwira Pro, yemahara kwenguva shoma
Maita basa murume, hazvisi zvekuti ndakashandisa muchina wekurekodha asi munune unorema kudaro
Idzi ndidzo dzese nhau dzakabatanidzwa muIOS 10 beta 2